Nguva Yakashandiswa paZviitiko zveMushandisi Mhedzisiro Mukutengesa Kwepamusoro | Martech Zone
Nguva Yakashandiswa paMushandisi Chiitiko Mhedzisiro muKutengesa Kwakakwirira
Mugovera, Nyamavhuvhu 17, 2013 Mugovera, Nyamavhuvhu 17, 2013 Douglas Karr
Econsultancy's Mushandisi Wakaitika Ongororo Ongororo, inoitwa pamwe chete ne WhatUsersDo - yepamhepo yekushandisa yekuyedza uye yemushandisi ruzivo rwekutsvagisa saiti - yakafukunurwa yakawanda nhamba.
74% emabhizinesi anotenda ruzivo rwevashandisi kiyi yekuvandudza kutengesa, shanduko uye kuvimbika.
Chii chinonzi Chiitiko cheMushandisi?
Zvinoenderana neWikipedia: Chiitiko chevashandisi (UX) chinosanganisira manzwiro emunhu nezvekushandisa chimwe chigadzirwa, hurongwa kana sevhisi. Chiitiko chevashandisi chinoratidzira chinoitika, chinobatika, chine musoro uye chakakosha mamiriro ekubatana kwevanhu-komputa uye muridzi wechigadzirwa.
Kunyangwe ini ndisingabvumirani zvachose nedudziro, bhizinesi rinofanira kutarisa pane ruzivo rwevashandisi zvishoma zvishoma. Hazvisi zvose pamusoro pemushandisi, ndezvekufananidza zvavanoda kune zvinangwa zvako uye nekupa iyo ruzivo, dhizaini uye kufamba kuti ubvise mukaha.
Metric yakakosha yekuti iwe uteedzere pane yako saiti yeVashandisi Zvakaitika:
Conversion Rate - Ndeipi muzana yevanhu vanosvika panzvimbo yako uye vanonyatso shandura kuita kutungamira kana kutengesa? Wati waita here zvinangwa mune yako Analytics chiyero chekucherechedza kana chiri kuwedzera kana kuti kwete?
Bounce Rate - Ndeapi nhamba yevaenzi vanosvika panzvimbo yako uye vanobva ipapo? Izvi zvinoratidza saiti inogona kunge isina kukwidziridzwa pakutsvaga uye munharaunda ... saka vashanyi vari kusvika netarisiro yeruzivo rwavachawana ipapo asi ivo havadaro. Kana mazwi akakosha achivatyaira akakodzera, saka une rimwe dambudziko… ruzivo urwo rwauri kupa harukumanikidze uye hausi kuvapinza munzira yekutendeuka.
Nguva paSiti - Kazhinji, mumwe munhu anoshandisa nguva yakawanda pane yako saiti anowanzo kuve akabatikana zvakadzama, chiratidzo chekuti iwo mutungamiriri wakanaka unokwanisa kushandurwa (metriki dzako dzinogona kusiyana!). Chii chauri kuita kuti ubatanidze vashanyi zvakadzika? Une vhidhiyo here? Whitepapers? Nyaya Dzidzo? A blog? Kupa ruzivo rwakasiyana siyana runotungamira kubatirana chinhu chakakosha.
Uye zvinopera pasina kutaura kuti Ruzivo rweVashandisi rwakavakirwa zvakanyanya pane dhizaini yako saiti, kubatanidzwa kwechiratidzo chako kwese, uye kupa masvikiro neruzivo vashanyi vako vanoda.
Dzimwe nguva, ruzivo rwemushandisi rwakashata runogona kuve chinhu chidiki sekuwana nhamba yefoni yekubata bhizinesi rako. Iyo inogona kuve iko kushandiswa kwemafonti uye chena nzvimbo inoita kuti zviome kuverenga. Iyo inogona kuve yekumaka uye yehunyanzvi dhizaini yako saiti uye kuti kana kwete kana iyo inopa iyo iwo mushandisi neyakaenzana danho rekuvimba nehunyanzvi. Uye, kazhinji kazhinji, zvinogona kuvhiringidza kushambadzira-kutaura izvo zvinoita kuti zviomere vashanyi vako kuti vanzwisise kana mhinduro yako ingave mhinduro kumatambudziko avo.
Usatarisira pasi kukanganiswa kweako mushandisi ruzivo. Kana iwe usina chokwadi, enda undozviedza. Kana iwe usingakwanise kubhadhara sevhisi, tora wako wechidiki kana murume / mukadzi uye tora maitiro avo. Unogona kushamisika.
Tags: bounce ratebhizinesi zvibodzwamwero wekushandurwaeconsultancymafontigoogle analyticsgoogle analytics zvinangwaruzivoKugonesa Kugonesanguva panzvimbouser experiencemushandisi anodachena
Scup: Yemagariro Midhiya Kuongorora, Kuongorora uye Kubatikana
Iyo Inokurumidza Kukura Dhijitari Kushambadzira Musika